ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: မြက်နှုတ်သူများနှင့် တဘဝတာ
ကိုပေါရဲ့စံနဲ့ မကိုက်ညီတာတွေ့ ရင် ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ အတိုက်အခံတွေဘက်မှာ ဒေါ်စု သာမရှိခဲ့ရင် ပွဲပြတ်သွားမယ်ဆိုတာ ကိုပေါ မြင်မှာပါ။ ပြည်ပက အတိုက်အခံတွေကို စစ်အစိုးရက ဖုတ်လေတဲ့ငပိ ရှိတယ်လို့တောင် မမြင်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာလဲ တဗိုလ်တက် တဗိုလ်ဆင်းမရအောင် အားလုံးကို သင်းသတ်ထားတာလဲ ကိုပေါ မြင်မိမှာပါ။ အာဏာရှင်တွေဟာ လူထုထောက်ခံတဲ့၊ နိုင်ငံတကာ က ထောက်ခံတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး အကြည်ညိုမဲ့အောင် လုပ်တတ်ကြတယ် ဆိုတာလဲ ကိုပေါသိပြီးသားဖြစ် မှာပါ။ ဒေါ်စုမှာ အချိန်သိတ်မကျန်တော့ပါဘူး။ သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နေပါလား လို့ မြင်ပေးပါ။ သူရှိနေလို့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာလေး ကြားနေရသေးပါလားလို့ မြင်ယောင်ပေးပါ။ ကျနော်တော့အာဏာရှင်တွေလက်အောက်မှာ နေနေရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား၊ ကျူးဘား နဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံ အချို့က ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ Documentary တွေ ကြည့်ပြီးတိုင်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အဲလို ငရဲခန်းမျိုး ရောက်သွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်မိတယ်။ ကိုပေါလဲ ရှာပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကိုပေါရဲ့စာတွေကို တလေးတစား ဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတဦးအနေနဲ့ ဒေါ်စုကို ဝေဖန်တဲ့စာတွေ ခဏသိမ်းထားစေချင်ပါတယ်။ မထောက်ခံချင်ရင်တောင်မှ မကန့်ကွက်စေလိုပါဘူး။
about "မိုးသီးဇွန်, ထွန်းအောင်ကျော်"? Who givesadamn? But you are talking about Daw Su and that is different story. You are talking about someone who left UK to come
to Burma and not clowns who left Burma for somewhere. You are comparing apples and oranges!
You can critisize Daw Su if she has stolen budget, if she plunder grant money, but you are barking
at Daw Su for no reasons while she
can do her best in country.
There are people, who are outside
Burma who want Daw Su to grew old and die as an icon so that they can raise profiles of their clowns daughters of clowns or clowns with funny names. I wished Daw Su can
work out inside the system while she is alive and healthy or we will end up seeing more clownish girls of all types will rush to give speeches and clowns will send emails saying they feel emotional.
Your 88 leaders, no one givesadamn too. The only politician I trust apart from Daw Su is Ko Zar Ga Nar. The rest are clowns!
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်တာကို ဖတ်လို့ ရတယ်။ ရေးသားပုံက ပညာတတ်ဆန်တယ်။
Well,Understood what you said.But It is too early to judge. Most of people (May be all people inside Burma) are happy seeing her with them.
I think you should go back to Myanmar for Aunty Su's advisor.
Bravely go back. No need to worry.
Like what you say without knowing detail is easy and everyones can say so. But nothing will happen. 20 years over!!!
ဒေါ်စုလွတ်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်အများနည်းတူ ပျှော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်၊ မတရားအမူဆင်ပြီး ဖမ်းတယ်လို.လဲ သိရလို. စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်၊ ခုတစ်ခါ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ.ဆုံဆွေးနွေးတယ် ဆိုလို. ပိုလို.တောင်မှ ၀မ်းသာရပါတယ်၊ ငါတို.နိုင်ငံတော့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ကိုတော့ ရောက်ပြီပေါ့၊ အဲဒါတွေက တော့ အပြုသဘောအနေနဲ.တွေးမိတာတွေ၊ ဖြစ်နိုင်တာတွေပေါ့၊ ဦးသိန်းစိန်က သူတို.ရဲ့ အဖွဲ.ထဲ မှာ သိပ်အဆိုးကြီးမဟုတ်လှပါဖူး၊ သူလဲ အသက်အရွယ်ကြီးလာလို. ဘုရား၊ တရားဖက်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်းလုပ်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
အပျက်သဘောဘက်က တွေးကြည့်ရအောင်ဗျာ၊ ဒေါ်စုနဲ. အစိုးရအဖွဲ.တွေ.တဲ့အချိန်ကလဲ အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အာဏာရှင်တွေကို ပြည်သူတွေဆန်ကျင်လို. အာဏာရှင်တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကျရှုံးနေတဲ့အချိန်တွေနဲ. တိုက်ဆိုင်လွန်း လှပါတယ်၊
အချိန်နှင့် ဖြစ်ပျက်ပုံတွေကို အကြမ်းဖျင်းကြည့်ကြရအောင်၊
ကျောင်းသားတွေအစပြုလို.ပေါ်လာတဲ့ အရေးအခင်းကြောင်း ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ပေါ်လာပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ် တာ NLD လည်းနိုင်ရော၊ အာဏာမလွဲပေးချင်လို. ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံ ဥပေဒေရေးဆွဲလိုက်တာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ကြာချင်သလိုကြာလိုက်တာ ၂၀၀၇ အရေးတော်ပုံကြောင်း ၂၀၀၈ နာဂစ် ဖွဲ.စည်းပုံ အတည်ပြုတာနဲ. ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ပေါ်လာပြန်ရော၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဆိုတာ မြောင်းထဲရောက်ပါလေရော၊
၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ပထမဆုံးက ဂျပန်လူမျိုး ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် လာတယ်၊ အဲဒီ့သူ ပြီးတဲ့နောက် မလေးရှားလူမျိုး ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်လာတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ဂန်ဘာရီလာတယ်၊ လာလိုက်ကြ၊ သွားလိုက်ကြနဲ. ဘာမှ မဖြစ်လာခဲ့ပါဖူး၊ ပြီး ကြက်ခြေနီအဖွဲ.ဆိုတာလဲ လှုပ်ရှားခွင့်ပေးလိုက်၊ ပိတ်လိုက်နဲ. လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတာ ကို တွေ.မိပါတယ်၊ နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးလာတဲ့အချိန်ဆိုရင် ဒေါ်စုကိုပွဲထုတ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ပြန်ဖမ်းလိုက်နဲ. ဒေါ်စုကို ဟန်ပြပြီးလုပ်စားနေတယ်လို.ပဲထင်မိပါတယ်၊ ၊ကျွန်တော်ကတော့ အစိုးရသစ်က အချိန်ဆွဲနေတယ်လို. ပဲထင်မိပါ တယ်၊ ဒေါ်စုကို ပြည်သူတွေချစ်တယ်၊ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ ကို အစိုးရကလဲသိပါတယ်၊ ၂၃ နှစ်လောက် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်လာတယ် ဆိုတော့ ပြည်သူနဲ. ဒေါ်စု ကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ သိတာပေါ့၊ နောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာရင် ဒေါ်စုကို အကြောင်း တစ်ခုပြပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချ ပါလိမ့်မယ်၊ သူတို.အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန်.ကိုတောင် အားရအောင်ခိုင်း၊ ၀အောင်အသုံးချပြီးတော့ တစ်ခါတည်း ဖြုတ်၊ထုတ်၊သတ်လုပ်တော့တာပဲ၊ ကျားက သားသားလွတ်လွတ်စား ဦးပုပ်စောင့်တယ်ဆိုတာ ယုံတယ် သူတွေရှိတော့လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဖူးပေါ့၊တကယ်တော့ လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေက အာဏာကို မစွန်.လွှတ်နိုင်တာက တကယ့်ပြဿနာပါ၊ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မလွှတ်ပေးသေးပဲ၊ ပြည်ပက သူတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးတာကလည်း နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းနေသလားလို.ပါ၊
ဒေါ်စုအနေနဲ. အသက်ကြီးပြီ ဆိုတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ပါတီကို ဦးဆောင်မဲ့ အသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ အမျိုသား၊ အမျိုးသမီးကို ရွေးချယ် တာဝန်ပေး၊ လေ့ကျင့်ပေးပြီး ပြည်သူတွေနဲ. ထိတွေ.ခိုင်းရမဲ့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ၊ ဒေါ်စု ကို ပြည်သူတွေထောက်ခံလို. NLD ဆိုတာလဲလူသိများတာပါ၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒေါ်စုကွယ်လွန်သွားတာနဲ. NLD ဆိုတာလမ်းဘေးပြ တဲ့ မျောက်ပွဲလောက်တောင် ဘယ်သူ.မှ စိတ်ဝင်စားကြမှာမဟုတ်ပါဖူး၊
အဲဒါနဲ.စကားစပ်လို. ကြာနီကန်ဆရာတော် ဟောတဲ့ အကြောင်းကို သတိရမိလိုက်ပါတယ်၊ ကြာနီကန်ဆရာတော်ကတရားဟောရာမှာ ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းက ဘုရားရဲ့ တရားပွဲမှာ ဒေသနာတရားတပုဒ်ကြားနားရင်းနဲ. သောတာပန်တည်သွား၊ တရားထူးတရားမြတ်ရသွားကြတယ်၊ ကြာနီကန်ဆရာတော်ဆိုလိုချင်တာက ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောတာလည်းဖြစ်သလို သက်ရှိဘုရားကို ဖူးရတဲ့ လူတွေကလဲ ကံထူးတယ်လို.ပြောပါတယ်၊ အဲဒါနဲ. တစ်ဆက်တည်းဟောတာက ဒီတရားပွဲကို ဟောနေတဲ့ ကျူပ်ကလဲ ဘာမှမဟုတ်တော့ ခင်ဗျားတို.လဲ ဘာမှမဖြစ်ဖူး (တရားထူးမရဖူး) လို.ဆိုလိုပါတယ်၊ ခုလဲ ပြည်သူတွေကို ဦးဆောင်တဲ့သူကလည်း ဘာမှပီပီပြင်ပြင် မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ ပြည်သူတွေလည်း ခုချိန်ထိ ဒီမိုကရေစီ အရသာကို မခံစားရသေးတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ လူတွေကတော့ ပြောမယ်၊ တွေ.ဆုံဆွေးနွေးနေပြီလေ၊ စောင့်ကြည့်လေ၊ ကောင်းလာမှာပေါ့ ဆိုပြီး ပြောကြပါလိမ့်မယ်၊ ၂၃ နှစ်စောင့်ပြီးပြီ၊ နောက်ထပ် ဘယ်လောက် အထိကြာအောင် စောင့်ရမှာလဲ၊
ကိုယ်လဲအကြားအမြင်မရလေတော့ တွေ.ရှိရတဲ့ အချက်တွေပေါ်က သုံးသပ်တာပါ၊ ဟုတ်၊ မဟုတ်ကတော့ အချိန်ကသာ အဆုံးအဖြတ် ပေးပါလိမ့်မယ်၊
တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ တွေ.ဆုံဆွေးနွေးမူကနေ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး ရယူပြီး တိုင်းပြည်ကြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာပါစေလို. ဆန္ဒပြမိပါတယ်၊ စိတ်ထဲကတော့ မယုံကြည်မူ အပြည့်အ၀နဲ. သံသယဖြစ်မိပါတယ်၊
အေဘီစီ ညတိုင်း ဘုရားရှစ်ခိုး၊ မေတ္တာပို.ပါတယ်၊ ကြေးစည်ထုပြီး အမျှဝေပါတယ်၊ ကြေးစည်လေး ကိုထုလိုက်တဲ့ အခါမှာ "မထင်" "မထင်" "မထင်" ဆိုပြီး အသံမြည်ပါတယ်၊
ကိုပေါရဲ့ ပို့စ်အသစ် ပြန်စတက်ကတည်းက လာဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ပေးမလို့ဟာ မအားလို့ အခုမှ ထပ်လာပေးဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် အားပေးလိုက်ကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေကလည်း များလွန်းလို့ လက်လျော့ပြီး ကိုယ်ပြောချင်တာပဲ ပြောတော့မယ်ဗျာ ။
လိုရင်းကတော့ ကိုပေါရဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ပတ်သက်သမျှ ဝေဖန်ထားတာတွေ အားလုံးကို သဘောတူတယ်လို့ မပြောလိုပေမယ့် ဝေဖန်တာကို အားပေးပါတယ် ။ တိုက်ခိုက်ရှုတ်ချတဲ့ အဆင့်မရောက်မချင်းလည်း ဆက်အားပေးနေအုံးမှာပါ ။
လူဆိုတာ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင်သူ ရှိဖို့မလွယ်သလို ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ရာ မြင်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး ။ ဒီတော့ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်က ဒီလို ကူညီဝေဖန်မှုတွေကို ကြိုဆိုဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်လို့ ယူဆပါတယ် ။
ဒီလောက်ပဲ မှတ်ချက်ပေးထားပါဦးမယ် ။ ကိုပေါနဲ့ သဘောမတူသူတွေနဲ့လည်း ကန့်လန့်လုပ်ပြီး ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး ။ တဖက်မှာလည်း ကိုပေါကို ဝေဖန်သူတွေကြောင့် ကိုပေါအတွက် အထောက်အကူ အများကြီး ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။